दुई महिना अगाडी मात्र बिहे गरेका डा. सुदिप अर्यालले आखिर किन चाले यस्तो कदम ? - Public 24Khabar
Home News दुई महिना अगाडी मात्र बिहे गरेका डा. सुदिप अर्यालले आखिर किन चाले...
दुई महिना अगाडी मात्र बिहे गरेका डा. सुदिप अर्यालले आखिर किन चाले यस्तो कदम ? मानसिक अस्पताल पाटनका कन्सल्ट्यान्ट साइक्यास्ट्रिक डा. सुदिप अर्याल मृ त अवस्थामा फेला पर्नुभएको छ । आज दिउँसो बुढानिलकण्ठस्थित एक होटलमा उहाँ मृ त फेला परेका हुन् ।
बबरमहलबाट अफिस जान्छु भनेर निस्किनुभएको उहाँ बुढानिलकण्ठस्थित होटलमा मृ त अवस्थामा फेला परेको सोही अस्पतालमा कार्यरत डा. बासु कार्कीले बताउनुभयो । डा. कार्कीका अनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट एमडी गरेका डा. अर्याल मानिसक अस्पतालमा कन्सल्टेन्ट थिए ।
नेपाल सरकारका नवौँ तहका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सुदीप अर्याल हिजो बुढानिलकण्ठको एउटा होटलमा आ’ त्मह त्या ग रे का छन्। दुई महिनाअघि मात्र विवाह गरेका उनको दुई महिना अघि बढुवा भएको थियो ।
उनले सयौँ व्यक्तिलाई आ’त्मह’ त्या गर्नबाट बचाउने गरी उपचार गरिसकेका छन्, तर दुर्भाग्य आफैलाई बचाउन सकेनन्। मानिसको मन जटिल हुन्छ। डा अर्यालका थुप्रै लेख रचनाहरू प्रकाशित भइसकेका छन् । बैकुण्ठबास होस्।
Previous articleटुक्रा–टुक्रा पारी सिमेन्टले प्लास्टर गरिएकाे सुजिताको श’व शौचालयको ट्याङ्की भित्र भेटियो
Next articleह’त्या हुनुअघि सुजिताले फोनमा भनेकी थिइन्ः कस्तो घरमा विवाह गराइदिएको ?